म पूर्ण अभिनेत्री भइसकें भन्ने हुँदैन रहेछ – Góc Ẩm Thực
अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीका लागि अभिनय गर्नु भनेको कुनै एउटा पात्रको जिवन जिउने मौका हो। उनी त्यसमा स्वभाविक देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन्। त्यस्तै उनी म पूर्ण अभिनेत्री भएँ भनेर कहिले भन्न नसकिने बताउँछिन्। किनकी सिनेमा गरेपिच्छे उनलाई लाग्छ- केहि नयाँ कुरा अझै सिक्न बाँकी छ। यो उनले ‘क्याप्टेन’ र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सिनेमा गरेपछि सिकेको-बुझेको कुरा हो।हाल उनी अभिनित ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सिनेमा प्रदर्शन भइरहेको छ। सिनेमाले समिक्षकहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ भने वक्सअफिसमा यो वर्ष हालसम्म प्रदर्शनमा आएका सिनेमामा सबैभन्दा अगाडि दौडिरहेको छ।सिनेमा हेर्नेले उनको कामको तारिफ गरिरहेका छन्। एकातर्फ गरेको कामको तारिफ र अर्कोतर्फ वक्सअफिसको सफलता। सिनेमाको यो प्राप्तिले उनमा खुशी ल्याएको छ।उनै उपासनासँग सेतोपाटीले सिनेमा रिलिजको संघारमा अशेष अधिकारीले गरेको कुराकानी यस्तो थियोः
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को के कुराले गर्दा सिनेमा गर्न उत्साहित भइयो? ब्यानर, रामबाबु गुरूङसँग काम गर्ने इच्छा, कथा र कथाभित्रको आफ्नो चरित्र चित्त बुझेर। मलाई जहिले पनि सामाजिकरूपमा जोडिएको कथामा सिनेमा गर्ने इच्छा थियो। यो सिनेमामा ती सबै कुरा पाएँ। यो सिनेमा गरेपछि जानेको बुझेको कुरा के हो -पहिलो सिनेमा भन्दा धेरै सिक्ने मौका पाए। कलाकारका रूपमा पहिला भन्दा परिस्कृत भएको अनुभव गरिरहेकी छु। राम्रो टिम, राम्रो कलाकारसँग काम गरेपछि धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्दो रहेछ। धेरै सिक्न बाँकी रहेको बुझें।सिनेमा क्षेत्रमा आउने पहिलेदेखिको लक्ष्य हो की पछि हुर्केको चाहना हो? नेपाली सिनेमा हेर्दा राम्रो र रमाइलो लाग्थ्यो। सोचेको त थिइन तर ‘क्याप्टेन’को अफर आएपछि जिया दिदी(जिया केसी)ले राम्रो हुन्छ भन्नुभयो।पहिलो सिनेमाको प्रस्ताव आउँदा कस्तो लागेको थियो? – सिनेमाको प्रस्ताव आउँछ भनेर मैले सोचेको थिइन। अलि नसोचेको तरिकाले प्रस्ताव आयो, त्यतिबेला गर्ने-नगर्ने निश्चित थिइन। किनभने एक त मलाई यसको ज्ञान थिएन अर्को मेरो पृष्ठभूमि पनि यो होइन। तर प्रस्ताव आउँदा खुशी लाग्यो। सिनेमाको प्रस्ताव आउनुअघि के गर्ने सोच थियो? व्यवसायतीर झुकाव थियो, उद्धमी बन्न चाहन्थे। मेरो ड्याडी सेनामा भएकाले मलाई सैनिकसेवामा पनि रूचि थियो।ती इच्छाहरूलाई छाडेर सिनेमा आउने निर्णय गर्न कति समय लाग्यो?
दुबै गर्न सक्छु, सन्तुलन मिलाउन सक्छु भनेर आउने निर्णय गरेको हो।सिनेमा आउनुअघिको नेपाली सिनेमा कस्तो लाग्थ्यो र आएपछि कस्तो लाग्यो? आएपछि न्यानो स्वागत नै पाएँ। आउनुअघि म मलाई स्वीकार गरिन्छ कि गरिदैन होला भन्ने कुराले केहि डराएकी थिएँ। सोचेको भन्दा राम्रो पाएँ।म अभिनय पनि गर्न सक्छु भन्ने कहिले थाहा भयो?पहिलादेखि नै जाने पनि नजाने पनि अभिनय मनपर्थ्यो। सिनेमा गर्ने भएपछि अभिनयको कक्षा जान थालेपछि थाहा पाएँ। म भित्र पनि अभिनय गर्ने क्षमता छ भन्ने पाटोबाट मैले कहिले पनि सोचेकै थिएन। सिनेमा गरेपछि आएको हो। स्कूल-कलेजमा ड्रामाचाँहि गरेको थिएँ।दुई वटा सिनेमा गरिसकियो, अब चाँहि आफूभित्र कस्ती अभिनेत्री छ भन्ने अनुभव भएको छ?setopati